Charter wezwe elingenabo udlame - Umhlaba Mashi
Ikhaya » Incwadi yezwe engenalo udlame
“Umqulu Womhlaba Ongenalo Udlame” ungumphumela weminyaka eminingana yokusebenza kwabantu kanye nezinhlangano ezinqobe iNobel Peace Prize. Uhlaka lokuqala lwethulwa engqungqutheleni yesikhombisa yamaNobel Laureates ngonyaka we-2006 kwathi inguqulo yokugcina yamukelwa engqungqutheleni yesishiyagalombili ngoDisemba 2007 eRome. Amaphuzu wokubuka neziphakamiso kufana kakhulu nalawo esiwabona lapha kulo Mashi.
I-11 kaNovemba ka-2009, ngesikhathi seNgqungquthela Yezwe Eyishumi eyayiseBerlin, abawinile I-Nobel Peace Prize bethula I-Charter yezwe elingenabo udlame kubaphakamisi be I-World March Yokuthula Nokungabi Nesono Bayokwenza njengabathunywa bombhalo njengengxenye yomzamo wabo wokwandisa ukuqwashisa emhlabeni jikelele mayelana nodlame. USilo, umsunguli we-Universalist Humanism kanye nokukhuthazwa kwe-World March, wakhuluma ngalokhu Okushiwo Ukuthula Nokungabi Nesono ngaleso sikhathi.
Udlame yisifo esibikezelayo
Awukho uMbuso noma umuntu ongaphephile emhlabeni ongaphephile. Amanani wokungabi nobudlova aphelile ukuba ngenye indlela yokuba yisidingo, zombili izinhloso, njengasemicabangweni nasezenzweni. Lawa magugu avezwa ekusebenzeni kwawo ebudlelwaneni obuphakathi kwezifunda, amaqembu nabantu ngamunye. Siyaqiniseka ukuthi ukubambelela ezimisweni zokungabi nodlame kuzokwethula ukuhleleka komhlaba onobuhlanga obunokuthula, lapho uhulumeni onobulungiswa futhi osebenzayo angatholakala khona, ehlonipha isithunzi somuntu nobungcwele bempilo uqobo.
Amasiko ethu, izindaba zethu kanye nezimpilo zethu ngazinye ziyaxhuma futhi nezenzo zethu zincike kwezinye. Namuhla kunanini ngaphambili, sikholwa ukuthi sibhekene neqiniso: elethu liyisiphetho esivamile. Lokho ukuphela kuzonqunywa ngezinhloso zethu, izinqumo zethu nezenzo zethu namuhla.
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukudala isiko lokuthula nokungabi nodlame kuwumgomo omuhle futhi odingekile, noma ngabe kuyinkqubo ende futhi enzima. Ukuqinisekisa izimiso ezichazwe kulesi Charter kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukusinda nokuthuthukiswa kwesintu nokufeza izwe ngaphandle kobudlova. Thina, abantu nezinhlangano zanikezela ngeNobel Peace Prize,
Ukuqinisekisa kabusha ukuzibophezela kwethu eSivumelwaneni Somhlaba Wonke Samalungelo Abantu,
Ukukhathazeka ngenxa yesidingo sokuqeda ukusabalalisa kobudlova kuzo zonke izigaba zomphakathi futhi, ngaphezu kwakho konke, ezinsongweni ezisongela ukuthi ubukhona buntu bukhona emhlabeni jikelele;
Ukuqinisekisa kabusha leyo nkululeko yokucabanga nokukhuluma iyisisekelo sombuso wentando yeningi kanye nobuciko;
Ukuqaphela ukuthi ubudlova ububonisa ngezindlela eziningi, kungaba njengoba izimpi, umsebenzi wezempi, ubumpofu, ukuxhaphaza kwezomnotho, ukucekelwa phansi kwemvelo, inkohlakalo kanye ubandlululo ezincike ebuhlangeni, inkolo, ubulili noma ubulili;
Ukulungisa ukuthi ukukhazimuliswa kobudlova, njengoba kuboniswe ngezohwebo zokuzijabulisa, kungabangela ukwamukelwa kobudlova njengesimo esivamile nesamukelekayo;
Ukuqiniseka ukuthi labo abathintekayo kakhulu ubudlova bangabantu ababuthakathaka futhi abasengozini kakhulu;
Ukucabangela ukuthi ukuthula akukhona kuphela ukungabikho kobudlova kuphela kodwa nokuba khona kobulungiswa kanye nenhlalakahle yabantu;
Ukucabangela ukuthi ukuqashelwa ngokwanele ukuhlukahluka kohlanga, amasiko kanye nenkolo engxenyeni yezizwe kungumsuka wodlame olukhona emhlabeni;
Ukuqaphela ukuphuthuma kokuthuthukisa enye indlela yokuphepha okuhlangene esekwe ohlelweni lapho okungekho mazwe, noma iqembu lamazwe, okufanele libe nezikhali zenuzi ngokuphepha kwalo;
Uqaphele ukuthi izwe lidinga izindlela ezisebenzayo zomhlaba wonke kanye nemikhuba engeyona enobudlova yokuvimbela nokuxazulula izingxabano, nokuthi lezi ziphumelela kakhulu uma zamukelwa esiteji sokuqala;
Ukuqinisekisa ukuthi labo abanegunya elinamandla banomthwalo omkhulu kunazo zonke wokuqeda ubudlova, nomaphi lapho ubonakala khona, futhi ukuvimbela lapho kunokwenzeka;
Ukuqiniseka ukuthi izimiso ezingezona ubudlova kufanele ziphumelele kuwo wonke amazinga omphakathi, kanye nasebudlelwaneni phakathi kwamazwe nabantu ngabanye;
Sitshela umphakathi womhlaba wonke ukuthi uthande ukuthuthukiswa kwemigomo elandelayo:
Ezweni elithandanayo, ukuvinjelwa nokuphela kwezimpikiswano ezihlomile phakathi kweMelika kanye naseMelika kudinga isenzo esihlangene emphakathini womhlaba wonke. Indlela engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuphepha kwamanye amazwe ukuthuthukisa ukuphepha komuntu jikelele. Lokhu kudinga ukuqinisa amandla okusebenzisa uhlelo lwe-UN kanye nezinhlangano zokubambisana zesifunda.
Ukufeza umhlaba ngaphandle kobudlova, amazwe kumele ahloniphe umthetho wokubusa futhi ahloniphe izivumelwano zawo zomthetho.
Kubalulekile ukuqhubeka ngaphandle kokulibaziseka ekubhekaneni nokuqedwa okuqinisekisiwe kwezikhali zenuzi nezinye izikhali zokubhujiswa okukhulu. Izizwe ezibamba izikhali kufanele zithathe izinyathelo eziphathekayo eziphathelene nokulwa nezikhali futhi zamukele isimiso sokuvikela esingasisekelwe ekunqandeni amandla enuzi. Ngesikhathi esifanayo, amazwe kumele azame ukuhlanganisa umbuso ongekho ukukhula, futhi uqinisekise ukuqinisekiswa kwezizwe eziningi, ukuvikela izinto zenuzi nokwenza izikhali.
Ukunciphisa ubudlova emphakathini, ukukhiqizwa nokudayiswa kwezikhali ezincane nezikhali ezilula kufanele kuncishiswe futhi kulawulwe ngokuqinile emazingeni omhlaba, wesifunda, wesifunda nendawo. Ngaphezu kwalokho, kumele kube nesicelo esiphelele nesifinyelele sezivumelwano zamazwe ngamazwe mayelana nokulwa nezidakamizwa, njengesivumelwano seMigodi yeMayini ye-1997, nokusekelwa kwemizamo emisha ehlose ukuqeda umthelela wezikhali ezingakhethi kanye nokusebenza. izisulu, njengama-cluster munitions.
Ubuphekula abukwazi neze ukulungiswa, ngoba ubudlova budala ubudlova futhi ngoba akukho senzo esesabekayo ngokumelene nomphakathi ongaphesheya kwanoma yiliphi izwe lingenziwa egameni lesisiphi isizathu. Kodwa-ke, ukulwa nobuphekula ngeke kulungise ukwephulwa kwamalungelo abantu, umthetho wosizo lwabantu jikelele, izinkambiso zomphakathi kanye nentando yeningi.
Ukuqeda udlame lwasekhaya kanye nasemindenini kudinga inhlonipho engenamibandela yokulingana, inkululeko, isithunzi namalungelo abesifazane, abesilisa nezingane, kubo bonke abantu nasezikhungweni zoMbuso, ezenkolo kanye izinhlangano zomphakathi. Ukunakekelwa okunjalo kumele kufakwe emithethweni nasezimvumelwaneni zasekhaya nezakwamanye amazwe.
Umuntu ngamunye noMbuso bahlanganyela nomthwalo wokuvimbela udlame olubhekiswe kubantwana kanye nabantu abasha, abamele ikusasa lethu elivamile kanye nefa lethu eliyigugu, futhi bakhuthaze amathuba okufundisa, ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo okuyinhloko, ukuvikeleka komuntu siqu, ukuvikelwa komphakathi kanye nemvelo esekelayo eqinisa ukungewona ubudlova njengendlela yokuphila. Imfundo ngokuthula, okugqugquzela ukungezona ubudlova nokugcizelela ukuzwelana njengemfanelo yangasese yomuntu kumele ibe yingxenye ebalulekile yezinhlelo zemfundo kuwo wonke amazinga.
Ukuvimbela ukungqubuzana okuvela ekuqedeni kwemithombo yemvelo kanye, ikakhulukazi, emithonjeni yamanzi namandla, kudinga ukuthi amazwe ahlakulele indima esebenzayo futhi aqalise izinhlelo zezomthetho kanye namamodeli anikezelwe ekuvikeleni imvelo nokukhuthaza ukugcinwa kwemvelo ukusetshenziswa kwalo ngokusekelwe ekutholakaleni kwezinsiza kanye nezidingo zabantu zangempela
Sibiza iZizwe Ezihlangene kanye namazwe ayo ukuba athuthukise ukuhlonishwa okunembile kokuhlukahluka kohlanga, amasiko kanye nenkolo. Ukulawulwa kwegolide kwezwe elingelona ubudlova: "Phatha abanye ngendlela ongathanda ukuphathwa ngayo."
Izinsimbi ezinkulu zezombusazwe ezidingekayo ukudala izwe elingenabo ubudlova yizikhungo eziphumelelayo zentando yeningi kanye nenkhulumomphendvulwano esekelwe ngesithunzi, ulwazi nokuzibophezela, okwenziwe ngokulingana phakathi kwamaqembu, futhi, uma kufanelekile, futhi ubeka engqondweni izici zomphakathi wesintu sonke kanye nendawo yemvelo ehlala kuyo.
Wonke amazwe, izikhungo kanye nabantu ngabanye kumele basekele imizamo yokunqoba ukungalingani ekusatshalalisweni kwemithombo yezomnotho nokuxazulula ukungalingani okukhulu okudala umhlabathi ovuthiwe wobudlova. Ukungafani kwezimo zokuphila kungabangela ukungabi namathuba futhi, ezimweni eziningi, ekulahlekelweni kwethemba.
Umphakathi, kubandakanya abavikeli bamalungelo abantu, ama-pacifists kanye nezishoshovu zemvelo, kumele kubonakale futhi kuvikelwe njengento ebalulekile ekwakheni izwe elingenalo udlame, njengoba nje bonke ohulumeni kumele bakhonze izakhamuzi zabo hhayi ngokuphambene. Izimo kufanele zenziwe ukuze zivumele futhi zikhuthaze ukubamba iqhaza komphakathi, ikakhulukazi abesifazane, ezinkambeni zezombusazwe emazingeni omhlaba wonke, wesifunda, kazwelonke kanye nendawo.
Lapho sisebenzisa imigomo yalesi Sivumelwano, sibhekana nathi sonke ukuze sisebenzele izwe elinobulungiswa futhi elinokubulala, lapho wonke umuntu enelungelo lokuthi angabulawa futhi, ngasikhathi sinye, umsebenzi wokungabulali kunoma ngubani
Amasiginesha we-Charter omhlaba ongenabo udlame
para ukulungisa zonke izinhlobo zobudlova, sikhuthaza ucwaningo lwesayensi emkhakheni wokuxhumana kwabantu kanye nenkhulumomphendvulwano, futhi simema imiphakathi yezemfundo, yesayensi nenkolo ukuthi isisize ekushintsheni emphakathini ongewona onobudlova nokungabulali. Bhalisela i-Charter for World Without Violence
UMairead Corrigan Maguire
Ubungcwele Bakhe Dalai Lama
UFrederik Willem De Klerk
Umbhishobhi omkhulu uDesmond Mpilo Tutu
UCarlos Filipe Ximenes Belo
Physicians International for the Prevention of Nuclear War
I-International Atomic Energy Agency
Ikomidi lezinkonzo zaseMelika
Ihhovisi Lomhlaba Wonke Lokuthula
Abasekeli balesi Sivumelwano:
UMasipala waseCagliari, e-Italy
Isifundazwe saseCagliari, e-Italy
UMasipala waseVilla Verde (OR), e-Italy
UMasipala waseGrosseto, e-Italy
UMasipala waseLesignano de 'Bagni (PR), e-Italy
UMasipala waseBagno a Ripoli (FI), e-Italy
UMasipala waseCastel Bolognese (RA), e-Italy
UMasipala waseCava Manara (PV), e-Italy
UMasipala waseFaenza (RA), e-Italy
Abantu Abanoxolo, eBelfast, eNyakatho Ireland
I-Association Memory Collettiva, Inhlangano
I-Hokotehi Moriori Trust, eNew Zealand
Umhlaba ngaphandle kwezimpi futhi ngaphandle kodlame
Isikhungo Sezwe Sezifundo Zabantu (CMEH)
Umphakathi (ngokuthuthukiswa komuntu), World Federation
Ukuguqulwa Kwamasiko, Umhlaba Womhlaba
I-International Federation Yezinhlangano Zabantu
Inhlangano "i-Cádiz Yokungabi Nodlame", eSpain
Abesifazane be-Change International Foundation, (United Kingdom, India, Israel, Cameroon, Nigeria)
Isikhungo Sokuthula Nezifundo Zasekhaya, ePakistan
I-Awaz Foundation, Isikhungo Sezinsizakalo Zokuthuthuka, ePakistan
I-Eurafrica, Inhlangano Yezamasiko Amnyama, iFrance
Imidlalo Yezokuthula i-UISP, e-Italy
I-Moebius Club, e-Argentina
I-Centro per lo sviluppo yokudala “i-Danilo Dolci”, e-Italy
ICentro Studi ed European Initiative, e-Italy
Isikhungo Sokuphepha Komhlaba, e-USA
I-Gruppo Emergency Alto Casertano, e-Italy
I-Bolivian Origami Society, eBolivia
IGocce di fraternità, Italy
I-Aguaclara Foundation, eVenezuela
I-Associazione Lodisolidale, Italy
I-Human Rights Education kanye ne-Active Conflict Prevention Collective, eSpain
ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Communication), eRwanda
Inhlangano Yentsha Yamalungelo Abantu, e-Italy
I-Athenaeum yasePetare, eVenezuela
I-Ethical Association ye-CÉGEP yaseSherbrooke, eQuebec, eCanada
I-Federation of Institutions yangasese Yezingane, Intsha Nokunakekela Umndeni (i-FIPAN), eVenezuela
I-Center Communautaire Jeunesse Unie de Parc Extension, eQuébec, Canada
Odokotela be-Global Survival, eCanada
I-UMOVE (Omama Abamanyene Abaphikisana Nodlame Yonke indawo), eCanada
I-Riding Grannies, eCanada
Ama-Veterans Against Nuclear Arms, Canada
Isikhungo Sokufunda Esiguqukayo, Inyuvesi yaseToronto, eCanada
Abagqugquzeli Bokuthula Nokungenzi Nhlalo, eSpain
I-ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), e-Italy
ILegautonomie Veneto, e-Italy
I-UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, Italy
I-Commissione Giustizia e Pace di CGP-CIMI, e-Italy
UMnu. Walter Veltroni, iMeya Yangaphambili yaseRoma, e-Italy
UMnu. Tadatoshi Akiba, uMongameli Wezimeya Zokuthula neMeya yeHiroshima
UMnu Agazio Loiero, uMbusi wesiFunda saseCalabria, e-Italy
USolwazi Sw Swathanathan, OwayenguMongameli Wezingxoxo ZasePugwash ngeSayensi Nezindaba Zomhlaba, Inhlangano Yomklomelo KaNobel
UDavid T. Ives, Albert Schweitzer Institute
UJonathan Granoff, uMongameli weGlobal Security Institute
UGeorge Clooney, umlingisi
UDon Cheadle, umlingisi
UBob Geldof, umculi
UTomás Hirsch, umkhulumeli weHumanism weLatin America
UMichel Ussene, okhulumela i-Humanism for Africa
UGiorgio Schultze, okhulumela i-Humanism for Europe
UChris Wells, uSomlomo weHumanism yaseNyakatho Melika
USudhir Gandotra, okhulumela uHumanism weSifunda sase-Asia-Pacific
UMaria Luisa Chiofalo, Umeluleki kuMasipala wasePisa, e-Italy
USilvia Amodeo, uMongameli weMeridion Foundation, e-Argentina
UMiloud Rezzouki, uMongameli weNhlangano ye-AODEC, eMorocco
U-Angela Fioroni, uNobhala weSifunda weLegautonomie Lombardia, e-Italy
U-Luis Gutiérrez Esparza, uMongameli we-Latin American Circle of International Study (LACIS), Mexico
UVittorio Agnoletto, owayekade eyilungu lePhalamende laseYurophu, e-Italy
U-Lorenzo Guzzeloni, iMeya yaseNovate Milanese (MI), e-Italy
U-Mohammad Zia-ur-Rehman, Umxhumanisi Kazwelonke we-GCAP-Pakistan
URaffaele Cortesi, iMeya yaseLugo (RA), e-Italy
URodrigo Carazo, owayenguMongameli weCosta Rica
ULucia Bursi, iMeya yaseMaranello (MO), e-Italy
UMiloslav Vlček, uMongameli weChamber of Deperior of Czech Republic
USimone Gamberini, iMeya yeCasalecchio di Reno (BO), e-Italy
ULuisa Morgantini, owayeyiPhini Likamongameli Wezwe Lephalamende LaseYurophu, e-Italy
UBirgitta Jónsdóttir, oyilungu lePhalamende lase-Iceland, uMongameli Wezabangane baseTibet e-Iceland
U-Italo Cardoso, uGabriel Chalita, uJosé Olímpio, uJamil Murad, uQuito Formiga, u-Agnaldo
UTimóteo, uJoão Antonio, uJuliana Cardoso u-Alfredinho Penna (“iPhalamende Phambili Lokuhambisana Nomhlaba Wokuthula NaseNão Violência eSão Paulo”), eBrazil
Katrín Jakobsdóttir, Ungqongqoshe Wezemfundo, Amasiko Nesayensi, e-Iceland
ULoredana Ferrara, Umeluleki wesiFundazwe sasePrato, e-Italy
U-Ali Abu Awwad, Isishoshovu sokuthula ngokusebenzisa ukungabi nabandlululo, ePalestine
UGiovanni Giuliari, Umeluleki kuMasipala waseVicenza, e-Italy
URémy Pagani, iMeya yaseGeneva, eSwitzerland
UPaolo Cecconi, iMeya yaseVernio (PO), e-Italy
UViviana Pozzebon, umculi, i-Argentina
UMax Delupi, intatheli nomshayeli, i-Argentina
UPáva Zsolt, iMeya yasePécs, eHungary
UGyörgy Gemesi, iMeya yaseGödöllő, uMongameli Weziphathimandla Zasekhaya, eHungary
U-Agust Einarsson, umphathi weYunivesithi yaseBifröst University, e-Iceland
USvandís Svavarsdóttir, uNgqongqoshe Wezemvelo, i-Iceland
USigmundur Ernir Rúnarsson, iLungu lePhalamende, e-Iceland
UMargrét Tryggvadóttir, iLungu lePhalamende, e-Iceland
UVigdís Hauksdóttir, iLungu lePhalamende, i-Iceland
U-Anna Pála Sverrisdóttir, iLungu lePhalamende, e-Iceland
UStráinn Bertelsson, iLungu lePhalamende, e-Iceland
USigurður Ingi Jóhannesson, iLungu lePhalamende, i-Iceland
U-Omar Mar Jonsson, iMeya yaseSudavikurhreppur, e-Iceland
URaul Sanchez, Unobhala Wamalungelo Esintu Esifundazweni saseCordoba, e-Argentina
U-Emiliano Zerbini, Umculi, i-Argentina
U-Amalia Maffeis, uServas - eCordoba, e-Argentina
U-Almut Schmidt, Umqondisi Goethe Institut, Cordoba, Argentina
Asmundur Fridriksson, iMeya yaseGardur, e-Iceland
I-Ingibjorg Eyfell, Umqondisi weSikole, uGeislabaugur, uReykjavik, e-Iceland
U-Audur Hrolfsdottir, Umqondisi Wezikole, I-Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Iceland
U-Andrea Olivero, uMongameli kaZwelonke we-Acli, e-Italy
UDennis J. Kucinich, iLungu leCongress, e-USA